Ungachinja sei imba yekugezera nemamwe mazano akapusa | Bezzia
Susana Garcia | 03/05/2021 20:00 | Decoration, Kushongedza maitiro
Imba yekugezera ndeimwe yenzvimbo dziri mumba medu izvo inoda mamwe mabasa uye shanduko kana tichida kuivandudza. Asi zvinokwanisika kushandura kutaridzika kwayo nemabatiro mashoma pasina kuenda kuburikidza nemabasa makuru kana maitiro akaoma. Ndosaka tichigona kucherechedza zvidimbu zvidiki nemazano ekuchinja imba yekugezera nenzira iri nyore inoita kuti tinzwe kuti tine nzvimbo nyowani.
Kuvandudza nzvimbo hachisi chinhu chiri nyore, asi tinogona kuzviita nemamwe mazano. Kune vanhu vanokwanisa kushandura nzvimbo dzavo pamba vasina kuita mabasa makuru, kuti vatore mukana wezvavanazvo uye vochengetedza mari pane iyo shanduko. Tichaona mamwe mazano achatibatsira kushandura imba yekugezera nenzira iri nyore.
1 Shandisa pendi yetira
2 Shingai neiyo Wallpaper
3 Chinja singi negirazi
4 Wedzera ivhu idzva
5 Wedzera zvirimwa
6 Sunga machira uye ruzivo
Shandisa pendi yetira
Chimwe chezvinhu zvinogara zvichikurudzirwa kana uchigadzirisa nzvimbo pasina kuisa mari yakawandisa kutenga pendi yakanaka yekupa zvese ruoko. Kwete chete iyo madziro anotarisa matsva, asi tinogona kuchinja ruvara rwekugezera Uye ita zvese kutora hupenyu hutsva Mune ino kesi isu tinofanirwa kushandisa tile pendi kana iri izvo zvatiinazvo muchimbuzi. Kune akawanda mapendi, ane matte, satin kana gloss kupera, kupa yako yekugezera chimiro chitsva. Iyi ndeimwe yematanho ekutanga aunofanira kufunga nezvazvo. Unogona kuchinja bhavhu, nzvimbo yekugezera kana madziro ese seizvi.
Shingai neiyo Wallpaper
Wallpaper chinhu icho chatinowanzo shandisa mumakamuri ekurara uye zvakare mumigwagwa kana makamuri ekugara. Asi hazvisi zvakajairika kuzviona munzvimbo yekugezera. Zvisinei, nhasi i yemhando yepamusoro chinhu chinogona zvakare kushandiswa mune dzimwe nzvimbo dzeimba yekugezera. Kana iwe uine nzvimbo yemadziro isina mataira, iwe unogona kutora mukana uye kutsunga neiyo huru Wallpaper kuti upe mazambiringa uye ane mavara kutaridzika kune yako yekugezera. Kana imba yekugezera iri yemazambiringa maitiro iro zano rakakura uye iwe unogona kuita yako yekugezera ive inoyevedza nzvimbo.
Chinja singi negirazi
Unogona invest in a new vanity unit and mirror. Icho chakakosha chikamu chekugezera chine yakawanda yekuvapo uye mukurumbira. Kana isu tisingakwanise kuchinja zvimwe zvinhu, kuisa musink nyowani nekuchengetedza uye girazi raunoda ingave imwe nzira yekuita kuti imba yekugezera itaridzike nyowani. Iwo akareruka, akapoterera kana mazambiringa-maitiro magirazi anozivikanwa kwazvo. Pazasi iwe unogona kuisa yekuchengetera unit yekuchengetera zvinhu mune yakanaka mwenje mwenje. Chero zvazvingaitika, dhizaini yemidziyo inoenderana nemabatiro eimba yekugezera.
Wedzera ivhu idzva
Uku kwatova shanduko isingagone kuitwa nemunhu wese, asi chokwadi ndechekuti zvinokwanisika kushandura pasi riine basa shoma nhasi. Unogona kusarudza pasi iyo iri gadza nekodha system yevinyl pasi izvo zvinotevedzera huni. Iko kune iwo ane mavara akanaka chaizvo uye ivo vanoita kuti nzvimbo iite senge yazvino uno uye yazvino nekungowedzera iyo pasi iyo yatinayo kana yakatobudikira muchitaera.
ari zvirimwa zvinopa ruvara uye hupenyu kune zvese. Ndosaka vachigona kuve iri zano rakanakisa rekushongedza nzvimbo. Kuwedzera zvirimwa uye maruva zvinowedzera bohemian uye yakakosha kubata kune chero nzvimbo. Panyaya yekugezera, isu tinofanirwa kuwedzera zvirimwa zvinomiririra mhepo ine hunyoro inowanzovapo, nekuti zvikasadaro havazorarame. Asi kune zvimwe zvirimwa zvinokodzera nzvimbo idzi.
Sunga machira uye ruzivo
Chimwe chinhu chaunogona chinja zviri nyore machira uye zvidiki zvidiki, iyo ichaitawo mutsauko mukuru. Tarisa matauro anoenderana nemamwe ruzivo uye iwe uchaona kuti izvi zvinosanganiswa zvinopa kumwe kuwirirana kune iyo nzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Maitiro ekuchinja yako yekugezera nenzira iri nyore